Apple Watch Etiquette: Goorma ayaad isticmaali kartaa Watchkaaga
Gogol-xannibaad Tilmaamaha & Tababarada
Si ka duwan sida casrigaaga ah ee aad ku jajabin kartid jeebka ama boorsada, Apple Watch-kaaga ayaa mar walba ku dhejinaya bareemaha. Haysashada dhamaan ogeysiisyadaada farahaaga waxay noqon kartaa wax aad u fiican si loo hubiyo inaadan waxba ka maqnayn, laakiin sidoo kale wuxuu furfuri doonaa adduun cusub oo xiiso leh iyo gabbaldhigga dabiiciga ah.
Gaar ahaan haddii aad haysato Apple Watch 3 oo leh taageero gacmeed, waxaa suurtogal ah inaad wicitaano iyo ogaysiisyo kale oo la socda meelo saacadahaaga laga yaabo inaad ka aamusi lahayd taleefanka gacanta hore.
Inkastoo aysan jirin xeerar adag oo degdeg ah marka aad u baahantahay oo aanad isticmaalin Apple Watch, waxaa halkan ku qoran dhawr tilmaamood oo maskaxda lagu hayo:
Hayso kooban - Haddii aad dad la joogtid oo aad heshid ogaysiis, waa fiican tahay inaad eegto Watch-kaaga si aad u aragto waxa ay tahay. Inkastoo ay fiicantahay in la arko waxa ogaysiinta ay tahay, isku day inaad sameyso isdhexgalkaaga la socoshada gaaban ee "Watch" markaad ku dhex jirto xaaladaha bulshada. Hadda waa waqtigii loo adeegsan lahaa si loo ogaado waxa ogeysiisyada soo socda, oo aan la macaamilin. Ha ka jawaabin wicitaanada kaarkaaga inta aad la joogtid dad kale, iskuday inaad isticmaasho jawaabaha dhajinta ee fariimaha qoraalka ah halkii ay ku qori lahaayeen qoraalkaaga Siri. Sidoo kale iskuday oo iska ilaali inaad gashid marxaladaha markaad dibedda ka baxayso.
Qofna ma doonayo in uu casho la qaato qofka ku haya ilaalinta saacaddiisa. Taasi waxay ka dhigeysaa inaad u egtahay inaad haysatid waxyaabo fiican oo aad ku raaxeysan karto martidaada cashada. Haddii aad la wadaagto qof qof hal-hal ah waxaa laga yaabaa inaad xitaa doonaysid inaad ku fekerto inaad ku daawato Habka Aan Habooneyn si aad u hubiso inaad u fiirsato meesha aad ka tirsan tahay.
Haddii aadan isticmaalin telefoonkaaga, ka bood saacadda - Ka hor inta aanad isticmaalin Apple Watch -kaaga, weydii naftaada haddii aad sameyneyso waa wax aad ku fakari lahayd in aad telefoonkaaga ku sameyso xaalad isku mid ah. Haddii ay haboon tahay inaad telefoonkaaga u soo jiiddo xaalad gaar ah , waxaa dhici karta in aysan ku habooneyn inaad isticmaasho Apple Watch isla xaaladda. Xeerarkan wuxuu u soconayaa taariikhaha, cashada qaddiyadaada, iyo masraxyada filimka madow. Haddii aadan isticmaali karin telefoonkaaga isla xaaladda, waa inaadan isticmaalin Watch-kaaga.
Mar labaad, Taasi ma ahan Dhibaato Cunto waa saaxiibkaaga, isticmaal. Tani waxay ka hortagi doontaa ogeysiisyada soo socda ee saacaddaada oo ay dhici karto in aad ku mashquuliso xaaladaha aad ka fiicnaan lahayd inaadan la falgalin iyaga. Taasina waa muhiim inaanu faahfaahin ka bixino sida hoos loogu dhigo.
Iska Joogso - Qofna ma doonayo in uu dhagaysto wargelinta ogaysiisyada ka imanaysa Maalintaada oo dhan. Haddii aad ka shaqeyso goob xafiiseed ama haddii kale si madax bannaan u socdo, hubi in codkaaga aad ka baxayso. Waxaad si toos ah u heli kartaa codka adigoo ku dhajinaya bogga ugu horeeya ee Galaaga iyo xulashada astaanta gambarka. Marka sanqadha la damiyo, badhanka boodhka ayaa iftiimin doona casaan iyo khadka ayaa ku wareegaya gambale.
Sida Loo Shido "Ha Iskuday 'Apple Watch
Haddii aad ogtahay inaad joogi doonto meel mudo ah oo aan habooneyn inaad hesho ogeysiisyadaada Daryeelkaaga, waxaad u jeedin kartaa 'Habeyn Aan Wax Bixin'. Sida muuqaalka macaamiishaada ee iPhone, Maahma'aantu waxay si ku meel gaar ah uga hortagi doontaa ogeysiisyada soo socda ee aad u socoto. Waa ikhtiyaar wanaagsan marka aad gasho shir ganacsi ama dhacdo kale oo aadan dooneynin inaad qaadatid Watch-kaaga, laakiin sidoo kale ma rabto inaad wax ka qabato ogeysiisyada ku saabsan baqshadaada muddo yar.
Waxaad kicin kartaa Ha ka caajisaan Apple Watch iyo sidoo kale app Apple App app.
Dharkaaga Apple Watch, ku dheji jaleecada Xayawaanka (waa midka koowaad ee kooxda) kadibna ku dheji khadka aan laheyn khariidadda. Ha cilaaqaynin waxaa matalaya sawir nus ah. Marka aan Baabi'idku dhaqdhaqaaqin, dayaxu wuxuu noqonayaa mid buluug ah.
Marka aad iPhone, biloow barnaamijka Apple Watch ka dibna ku dheji "Do not Disturb". Laga bilaabo halkan, beddel galka si cagaar ah si aad u hesho muraayadda Apple Watch Maqnaanshaha Dhibaatada ku samee iPhone. Hadda mar kasta oo aad soo jeediso Ha ku dhibin telefoonkaaga, waxaa lagugu xoojin doonaa Apple Watch iyo sidoo kale.
Sidee loo bedelaa wajiga Apple Watch
Sida Loo Beddelo Jadwalka Daawashada Qalabka Android-ga Gacanta
Gacmaha Qalabka Caadiga ah
Helitaanka Joojinta ugu fiican Jawbone UP Tracker Fikrad ahaan loogu talagalay
8 Qarsoodi ah Apple Watch Features waxaad u baahan tahay inaad isku daydid
Sida Loo Isticmaalayo Apple's App's Workout App
Sida loo qaabeynayo Apple Watch-ka cusub
10 Hababka Apple Watch wuxuu kaa caawin karaa wax soo saar
Ma Ikhtiyaarkaaga Apple Watch?
Qalabka Internetka ee ugu fiican iyo Kumbuyuutarrada yaryar
Isbedel Dhaqdhaqaaq Dhaqdhaqaaq Dhaqanka ee Excel
Sida loo soo rogo Muusikada Amazon MP3 Cloud Player
Sidee loo raaci karaa, isbeddel, iyo tirtirka buugaag ee Safari
Ka qaado Duubo Ka yimid Mac 'Open With'
Halloween Tani, Xayawaankaaga Minecraft!
7 Siyaabaha Loo Isticmaalo Internetka ee Gawaaridaada
JBOD: Abuuri hal Diskooliyadeed oo ka yimaada darawal adag oo adag
Project Wikis Isticmaal goobaha Google
Tomb Raider II Cheats-PS1
Zazzle - Webstore iyo Review Review Blog
Inkastoo ay taariikh tahay, RCA Jacks waa ka wadaag badan tahay inaad ka fikirtid
Sida loo Xariiro Xiriirinta Macluumaadkaaga Dhageysiga Gurugaaga ee Dhageysiga Korjoogaha
Sida loo Zip iyo Unzip Files iyo Folders Mac
Sidee si joogto ah u tirtirtaa fariimaha qoraalka on iPhone
Qaababka Wireless iyo Waxqabadyada Wareegyada
Sidee loo Isku Dayaa Jadwalka Yahoo adoo isticmaalaya iPhone Calendar
Maxay Sameeyaa SSL & SSH?
Muxuu yahay Mishiinka Korjoogtada ah iyo Sidee Ayuu U Shaqeeyaa?
Xareeyaha: Tom Mac Software Pick